किन इन्काउण्टर ? प्रहरीको असफलता कि बहादुरी ? – Himshikharnews.com
किन इन्काउण्टर ? प्रहरीको असफलता कि बहादुरी ?
२३ श्रावण २०७५, बुधबार २१:५१
पछिल्लो समय इन्काउण्टर कल्चर नेपालमा मात्र होइन छिमेकी देश भारतमा पनि प्रचलनमा छ । उच्च राजनीतिक निकटता रहेका गुण्डा वा आपराधिक व्यक्तिलाई कानुनी तवरमा कार्वाही गर्न नसक्ने भएपछि प्रहरीले इन्काउण्टर गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालकै इतिहास हेर्दा पनि त्यसमा थप आधार मिल्छ । तर, हत्या, अपहरण, बलात्कारजस्ता विषयमा बिना कानुनी अनुसन्धान अभियुक्तलाई मारिदिने हो भने संविधान, कानून र न्यायालयको के अर्थ ? दोषीहरुले पुर्याएको सामाजिक, मानवीय क्षति हेर्दा उनीहरुमाथिको हदैसम्मको कार्वाही पनि जायज जस्तो लाग्छ । बलात्कार, अपहरणजस्ता अक्षम्य अपराधमा संलग्न भएका भनिएकाहरुलाई मार्दा तत्कालिन रुपमा चौतर्फी प्रशंसा भएपनि यो प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा कानुन र विधिको शासनमाथि नै धावा हुने हो की भन्ने विषयचाहीँ सबैले सोच्न जरुरी छ । source : reportersnepal.com